Joonsan guyyaan miseensummaa gamtaa Awurooppaa keessa bahaan akka dheeratu gaafatan – Fana Broadcasting Corporate
Joonsan guyyaan miseensummaa gamtaa Awurooppaa keessa bahaan akka dheeratu gaafatan
Finfinnee, Onkololeessa 10, 2012 (FBC) – Muummeen ministira Biriitaaniyaa Booris Joonsan guyyaan miseensummaa gamtaa Awurooppaa keessa bahaan akka dheeratu gaafatan.
Muummeen ministiricha yaadni haala miseensummaa gamtaa Awurooppaa keessaa itti bahaan mana maree biyyattiif dhiyyeessaan kufuu isaatiin guyyaan murtee akka dheeratuuf gamtaa Awurooppaa gaafataniiru.
Guyyaan kun dheerachuun murteessa ta’uu akka amanan gamtichaaf xalayaa barreessaniin ibsuun, gamtichiis xalayaan qaqqabuu isaa beeksisee hooggantoota gamtichaa waliin akka irratti mari’atu ifoome jira.
Gamtichi guyyaa murtoo kana dheeressu irratti waliigale taanan, Booris Joonsan bara Faranjoota Onkololeessa 31 gamticha keessaa shakkii tokko malee ni baana jedhanii yaadni isaan dubbatan amantaa akka dhabu tilmaamaa jira.
Preezdaantiin Booliviiyaa aangoo gadi lakkisan
Baangilaadeeshitti Obomboleetti ciimaa mudateen lubbuun namoota 6 darbe